FIFA oo ku dhawaaqday 10-ka tababare ee u sharraxan abaal-marinta macallinka sanadka ee The Best & Mid Afrikaan ah oo ka mid ah – Gool FM
FIFA oo ku dhawaaqday 10-ka tababare ee u sharraxan abaal-marinta macallinka sanadka ee The Best & Mid Afrikaan ah oo ka mid ah
Haaruun July 31, 2019
(Yurub) 31 Luulyo 2019. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay musharrixiinta ku tartami doona abaal-marinta macallinka sanadka ee The Best, iyadoo uu ku jiro hal tababare oo Afrikaan ah.
Liiskaan oo ka kooban 10 tababare ayaa ku tartami doona abaal-marinta sanadka ee macallinka ugu fiican tababareyaasha ragga 2019, waxaana si rasmi ah loogu dhawaaqay goordhow.
Macallinka xulka qaranka Faransiiska ee Didier Deschamps oo abaal-marintan ku guuleystay sanadkii hore ee 2018 kaddib markii uu xulkiisa Les Bleus ku hoggaamiyey Koobkii Adduunka 2018 ayaa hadda ka mid ah macallimiinta sanadkan tartami doona.
Pep Guardiola oo ka mid ah macallimiinta sanadkan loo badinayo inay ku guuleysan karaan abaal-marintan ayaa ku jira ragga musharraxiinta ah, kaddib markii uu kooxdiisa Manchester City ku hoggaamiyey saddexleey koobabka maxaliga ah.
Hoggaamiyahaan reer Spain ayaa Man City kula guuleystay horyaalka Premier League, sidoo kale waxa uu la qaaday FA Cup, halka uu ku hoggaamiyey Carabao Cup xilli ciyaareedkii 2018/19.
Jurgen Klopp ayaa ka mid ah liiskan kaddib markii uu Liverpool u gacan galiyey koobkoodii lixaad ee horyaallada Yurub, halka macallinkii Tottenham oo ay Klopp isla tageen Final-kii Uefa Champions League ee Mauricio Pochttino uu sidoo kale ka mid yahay musharraxiinta.
Djamel Belmadi, kaasoo xulka qaranka Algeria ku hoggaamiyey hanashada koobka qarammada qaaradda Afrika ayaa ah afrikaanka kaliya ee ku jira musharraxiinta tobanka macallin ee ku tartamaya abaal-marinta tababaraha sanadka ee The Best.
Macallinka xulka qaranka Brazil ee Tite, kaasoo xulkiisa Selecao ku hoggaamiyey Copa America ayaa sidoo kale ka mid ah liiskan maanta ay soo saartay FIFA.
Macallinka ku guuleysta abaal-marinta sanadka ee macallinka ugu fiican ragga waxaa looga dhawaaqi doonaa xafladda abaal-marinnada FIFA ee The Best oo lagu qaban doono Magaalada Milan 23-ka bisha September.
Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska 10-ka tababare ee ku tartami doona abaal-marinta sanadka ee macallinka ugu fiican tababareyaasha ragga 2019:-
🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men’s Coach nominees:
Macallin Unai Emery oo dib u dhis xoggan ku sameynaya Arsenal, xilli kooxdu haatan ay qarka u saaran inay soo qaadato daafac cusub
RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday 10-ka xiddig ee u sharraxan abaal-marinta laacibka sanadka ee The Best… (Kooxda Liverpool oo saddex ku leh)